ရှာမှရှားတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီး (သို့) မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ဒေါ်မြစိန် - Thutazone
ရှာမှရှားတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီး (သို့) မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ဒေါ်မြစိန်
By ThutammPosted on February 11, 2018 August 18, 2018
နှစ်ဆယ်ရာစု အတွင်း မြန်မာ အမျိုးသမီးများ၏ ထူးချွန် ထက်မြက်မှုကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပညာရည်ဖြင့် ထင်ရှားစေခဲ့သူတဦးမှာ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါ်မြစိန် (၁၉ဝ၄-၁၉၈၈) ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာအမျိုးသမီးလောကတွင် ပညာရည်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ မျိုးရိုး ဂုဏ်ရည်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပင်ကိုယ်ထူးချွန် ထက်မြက်မှု အရည်အသွေးအားဖြင့် လည်းကောင်း ဒေါ်မြစိန် (M.A., B.Litt. Oxford) ကို ယှဉ်နိုင်သူ မရှိဟုပင် ဆိုရပါမည်။
ဒေါ်မြစိန်ကို ၁၉ဝ၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ ဖွားသည်။ အဖ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမေအောင်၊ အမိ ဒေါ်သိန်းမြ ဖြစ်သည်။ ဖခင် ဦးမေအောင်မှာ ရခိုင် အမျိုးသား ငွေစာရင်းမင်းကြီး (အိန္ဒိယ ငွေတိုက်ဝန်) ဦးလှအောင်၏ တူဖြစ်သည်။ မိခင် ဒေါ်သိန်းမြမှာ မွန်လူမျိုး စစ်ကဲကြီး ဦးထော်လေး၏ မြစ် ဖြစ်သည်။ ဒေါ်မြစိန်မှာ မွေးချင်း သုံးယောက်တွင် အထွေးဆုံး ဖြစ်၍ ငယ်မည်မှာ မေ ဖြစ်သည်။ အစ်ကို သာဒိုးအောင်နှင့် ထွန်းလှအောင်တို့မှာ ထိုခေတ်က ထင်ရှားလှသော ရနောင်း ပညာထူးချွန်ဆု (Renoun Prize) ရသည်။ ဖခင် ဦးမေအောင်လည်း ဤဆုကို ရခဲ့သည်။ အစ်ကိုကြီး သာဒိုးအောင်မှာ ပညာ ထူးချွန်သော်လည်း ငယ်စဉ်ကပင် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့၍ ဘီအေ နောက်ဆုံးနှစ် ပညာ သင်ကြားနေစဉ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သာဒိုးအောင်ကို အကြောင်းပြု၍ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သိပ္ပံ ဥပစာတန်း ပထမဆု ရသူများကို “သာဒိုးအောင်ဆု” ဖခင် ဖြစ်သူက တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ အစ်ကို ထွန်းလှအောင်မှာ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦး ရဲမင်းကြီး ဦးထွန်းလှအောင် အဖြစ် ထင်ရှားသည်။
ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် အိမ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပြင်သစ်စာကို သီးသန့် သင်ခဲ့ရသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသနာပြု ဒိုင်အိုဆီဇင် မိန်းကလေးကျောင်း (Diocesan Girl’s High School)တွင် ၇ တန်း ပထမ ရသည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် မဟုတ်၍ ပညာသင်ဆု (Scholarship) မရခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် ဖခင်က ရှင်မာရီကျောင်း (St. Mary’s SPG High School) သို့ ပြောင်းရွှေ့ ပညာ သင်စေသည်။ အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ် စာမေးပွဲကို မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရာဇဝင်၊ အပိုသင်္ချာ၊ အိမ်တွင်းမှု သိပ္ပံ ဘာသာရပ် အားလုံးတွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သည်။
တနိုင်ငံလုံးတွင် တတိယ ရခဲ့သည်။ ရန်ကုန် ကောလိပ်တွင် ပညာ ဆက်လက် သင်ကြားရာ အိုင်အေ အထက်တန်းကို အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ၊ ရာဇဝင်၊ ရူပဗေဒ ၄ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် ပထမ ရသည်။ ဂျားဒင်းဆု (Jardin Prize) ချီးမြှင့် ခံရသည်။ ဤဆုကို ဖခင် ဦးမေအောင်လည်း ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ပထမဆင့်မှ ပထမ ရခဲ့သည်။ ၁၉၂၈-၃ဝ တွင် အစိုးရပညာတော်သင် အဖြစ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၌ ပညာ ဆက်လက် ဆည်းပူးရာ ဆရာဖြစ်သင် ဒီပလိုမာနှင့် ဘီလစ်ဘွဲ့ (B. Litt.) ရခဲ့သည်။
ဒေါ်မြစိန်သည် ဖအေတူ သမီးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဖခင် ဦးမေအောင်(M.A., L.L. M. Cambridge, Barrister at Law) မှာ ကိုလိုနီခေတ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး လောကတို့တွင် ဘက်စုံ ထူးချွန် ထက်မြက်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်သည်။ ဘိလပ်ပြန် ဝတ်လုံတော်ရ၊ တရားသူကြီး၊ ဥပဒေ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေပညာရှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်း တည်ထောင်သူ၊ သုတေသန အသင်း ဂျာနယ်အယ်ဒီတာ၊ ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒိုင်အာခီခေတ် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ် စသည်ဖြင့် စွယ်စုံထင်ရှားသည်။
ထိုခေတ် အုပ်ချုပ်သူ ဗြိတိသျှတို့ကပင် သူ၏ ထူးချွန်ထက်မြက်မှုကို အသိအမှတ်ပြု၍ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံခဲ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ဒေါ်မြစိန်သည် ကိုလိုနီခေတ် အတွင်း မြန်မာ အမျိုးသမီးများထဲမှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် ဘီလစ်ဘွဲ့ကို ပထမဦးဆုံး ရခဲ့သူ၊ မြန်မာ့အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အစောဆုံး ရေးသားခဲ့သူ၊ ၁၉၃၁ ခုနှစ်၊ ဂျီနီဗာတွင် နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေး စီစစ်မှု ကော်မတီသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ၊ ၁၉၃၁-၃၂ တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရသူ စသည်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။
ဒေါ်မြစိန်၏ လူသိနည်းသော စွမ်းဆောင်ချက်တရပ်မှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်သည် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် စေ့စပ် အရေးဆိုရသော အခါ မြန်မာ့ သဘောထား အမှန်ကို ဗြိတိသျှတို့ သဘောပေါက် နားဝင်စေရန် ဟောပြော ဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ပါရီ ယူနက်စကို ကွန်ဖရင့် တက်ရောက်ခဲ့စဉ် ဗြိတိသျှ လေဘာပါတီ၏ အမတ်အချို့နှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာတို့၏ လွပ်လပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။ ဒေါ်မြစိန်သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံ အစည်းအဝေးများတွင် နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု၍ တက်ရောက်ခဲ့ရရာ သူ၏ ထူးချွန် ထက်မြက်မှု၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အဟောအပြော ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကြောင့် အလွန်ထင်ရှားခဲ့သည်။
၁၉၃ဝ-၃၁ တွင် ဒေါ်ကြီးကြီး နေရှယ်နယ် အမျိုးသမီး အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်၊
၁၉၃၁-၃၂ တွင် ဂျီနီဗာ အမျိုးသမီး ကွန်ဖရင့် ကိုယ်စားလှယ်၊ လန်ဒန် ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ကိုယ်စားလှယ်၊
၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် အိုင်စီအက် ဦးရွှေဘော် (Ph.D., M.A.B.L.) နှင့် လက်ထပ်၍ သားတဦး (ဦးမြဘော်)၊ သမီးတဦး (ဒေါ်မြသန္တာ) ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် ခင်ပွန်းသည်နှင့် ပြတ်စဲ၍ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေးရေးရာ လုပ်ငန်းများတွင် တက်တက်ကြွကြွ ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၃၈-၄၂ တွင် ဝိတိုရိယ ဘုရင်မ အထိမ်းအမှတ် အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော် မြူနီစပယ် အဖွဲ့ဝင်၊ ရန်ကုန် ပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသမီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း ဒါရိုက်တာ၊
၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်၊
၁၉၄ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဒေါ်မြစိန်သည် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော “ကမ္ဘာ့ ရုပ်စုံဂျာနယ်” (World Pictorial) ၌ အယ်ဒီတာ
၁၉၄၁-၄၂ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ အမျိုးသမီး ဌာနခွဲ အုပ်ချုပ်သူ၊ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ လူကြီး၊
၁၉၄၂-၄၅ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆင်းမလာမြို့ မြန်မာ စစ်ပြေးအစိုးရ အဖွဲ့ အကြံပေး၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ပါရီ ယူနက်စကို ကွန်ဖရင့် ကိုယ်စားလှယ်၊
ပထမအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ လန်ဒန် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး (The Round Table Conference) သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ရာ ဒေါ်မြစိန်သည် တဦးတည်းသော အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။ ထိုကွန်ဖရင့်သို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဦးဘဘေ၊ ဦးချစ်လှိုင်၊ အမ်အေ ဦးမောင်ကြီး၊ သာယာဝတီ ဦးပု တို့လည်း တက်ရောက်သည်။ ကွန်ဖရင့်တွင် ဒေါ်မြစိန်သည် တွဲရေး ခွဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေး အပေါ် မြန်မာတို့၏ သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရဲဝံ့ဝံ့ တင်ပြခဲ့သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မီး မြန်မာပြည် ကူးလာချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်တပ်များ အိန္ဒိယသို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ရာ ဒေါ်မြစိန်သည်လည်း တရုပ်ပြည်နယ်စပ် ချုံကင်းမှ အိန္ဒိယသို့ ကူးခဲ့သည်။ ထိုကိုယ်တွေ့ စစ်ပြေး အတွေ့ကြုံများကို စစ်ပြီးစ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဦးတင်ထွတ် ဦးဆောင် ထုတ်ဝေသော Burmese Review (ဘားမီးရီဗြူး) အင်္ဂလိပ်စာစောင်တွင် “Retreat to China, the war adventure ofaBurmese lady” မြန်မာ အမျိုးသမီးများ၏ စစ်အတွင်း အတွေ့အကြုံ အမည်ဖြင့် အခန်းဆက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ စစ်အတွင်း အိန္ဒိယ၌ နေထိုင်စဉ် ဆင်းမလား စစ်ပြေး အစိုးရ ထုတ်ဝေသော Burma To-Day Vol. 1, No. 8 (June 1944) တွင် မြန်မာ အမျိုးသမီး ဘဝကို ဖော်ကျူးသော Little Lovely Diamond: the story of Kin Sein Hla ဝတ္ထုတို့ကို ရေးဖွဲ့သည်။ ဒေါ်မန်စမစ် ဦးဆောင်သော မြန်မာပြည် စစ်ပြေး အစိုးရ၏ မြန်မာပြည် ဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ Burma၊ ပြည်မြန်မာနှင့် The Future of Burma မြန်မာပြည်၏ အနာဂတ် စာအုပ်ငယ် နှစ်အုပ်ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၅၁-၆ဝ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သမိုင်း ကထိက၊ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လေ့လာရေး အဖွဲ့ဝင်၊
၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် အာရှဖောင်ဒေးရှင်း အစီအစဉ်ဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် ၁၄ ခုတွင် မြန်မာ့ရေးရာ ဟောပြော ပို့ချရေး ပညာရှင်၊
၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဝန်ထမ်းဘဝမှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့ပြီး သက်ကြီး တက္ကသိုလ်တွင် သမိုင်း ကထိက အဖြစ် ခေတ္တ ဆောင်ရွက်
၁၉၆ဝ ခုနှစ်တွင် ဝါရှင်တန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ကွန်ဖရင့် သဘာပတိ မိန့်ခွန်း ပြောကြားသူ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆွစ်တာရီ ကောလိပ် အရှေ့တောင်အာရှ ဆိုင်ရာ ဧည့်ပါမောက္ခ၊ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်း ဧည့်ပါမောက္ခ၊
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နေစဉ် လန်ဒန်မှ ထုတ်ဝေသော Asian Affairs (London) အာရှရေးရာ စာစောင်တွင် Towards Independence in Burma; The role of women (မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ)၊ Hemisphere စာစောင်တွင် Pagodas of Pagan (Bagan) (ပုဂံဘုရားများ စာတမ်း) များ ရေးသားခဲ့
၁၉၇ဝ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် စိန့်ဟောက် ကောလိပ်၌ သုတေသန ပညာရှင် စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စောမုံညင်း “ဒေါ်မြစိန်”၊ ဗမာ (မြန်မာ) အမျိုးသမီးများ။
“ဒေါ်မြစိန်”၊ ရှုမဝ၊ အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၉၄ (မတ် ၁၉၉၅)၊
ဘုန်းမြင့်၊ ရွှေမင်းဝန်၊ “မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အမ်အေ ဒေါ်မြစိန်”
အောင်သန့်၊ ဦး၊ “သံတမန် ဝန်ထမ်းပေါက်စ ဘဝ”၊
ဓမ္မဗျူဟာ ငွေရတုစာစောင်၊ (ဇူလိုင် ၁၉၈၆)။
ရှာမှရှားတဲ့ မွနျမာ့အမြိုးသမီး (သို့) မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ ဒျေါမွစိနျ (unicode)
Posted in Knowledge, PeopleTagged knowledge, myanmar, people
Previous post လိုအပ်တဲ့အခါသုံးနိုင်မယ့် လွယ်ကူသက်သာ နည်းလမ်းပေါင်း ၅၀
Next post အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးခွဲမှုကို ချေဖျက်လိုက်သော ဦးနုရဲ့ သမိုင်းဝင်စကား